White (Ghost) ရွှေဖရုံသီး - စောင့်ရှောက်မှု၊ အမျိုးအစားများနှင့်ကြီးထွားလာသောအချက်များ - ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ
White (Ghost) ရွှေဖရုံသီး - စောင့်ရှောက်မှု၊ အမျိုးအစားများနှင့်ကြီးထွားလာသောအချက်များ
ဥပမာအဖြူရောင်တစ္ဆေရွှေဖရုံသီးကိုယူပါ။ အဖြူရောင်ဖရုံသီးများကိုဓားသို့မဟုတ်ဆေးသုတ်ဆေးအနည်းငယ်ကို အသုံးပြု၍ သရဲတစ္ဆေလှည့်ကွက်တစ်ခုဖြင့်အိမ်နံရံတစ်ခုသို့ပြုလုပ်နိုင်သည်။ ထို့နောက်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲပြီးသွားသောအခါနှင်းပွင့်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးနောက်တစ်နေ့အားလပ်ရက်အတွက်အချိန်တိုအတွင်းမှာပင်ဖုတ်ဖုတ်ရသည်။
Ghost ရွှေဖရုံသီးသည်သင်၏ရွှေဖရုံသီး၏တောက်ပမှုကိုတောက်ပစေနိုင်သည်။ သင်၏ရပ်ကွက်ရှိအနုပညာရှင်များသည်ထိုအလွတ်ပန်းချီကားများကိုဆေးသုတ်ရန်အသည်းအသန်ကြိုးပမ်းကြလိမ့်မည်။ အကယ်၍ သင်သည်အိမ်နီးချင်းများအခွံမာသီးများကိုမောင်းနှင်လိုပါကထိုအဖြူရောင် orbs အမြောက်အများကိုစိုက်ပါ။
ဆောင်းတွင်း squash ဟုလည်းသိကြသည့်ရွှေဖရုံသီးများသည်ဖရုံသီးများရှိသလောက်အရောင်များစွာကိုထွက်ပေါ်လာသည်။
ဘယ်လောက်ကြာ? ဘီစီ ၇၀၀၀ မှ ၅၅၀၀ အကြားရှိဖရုံမျိုးစေ့အချို့သည် မြောက်အမေရိကဖရုံသီးရဲ့ဇာတိမြေယာအောင်, မက္ကစီကိုအတွက်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြသည်။
မကြာသေးမီကမှ (၂၀၀၅ ခုနှစ်ဝန်းကျင်) အဖြူရောင်ဖရုံသီးများသည်၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်ကျက်သရေနှင့်ထူးဆန်းမှုအတွက်တီထွင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ဒေသခံလယ်သမားစျေးကွက်တွင်လိမ္မော်ရောင်နှင့်အစိမ်းရောင် squash အကြားပေါ်လာသည့်ကျပန်းအရိပ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ထိုအမျိုးပေါင်းအများစုနေပါစေသူတို့ဘယ်အရောင်ပဲစိတ်ကူး pies လုပ်!
ကလေး Boo ဖရုံသီး
၎င်းသည်အသေးငယ်ဆုံးနှင့်အကျဆုံးဆုံးသောအရာများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ကလေးများအတွက်ကောင်းမွန်သောယာဉ်စီမံကိန်းများနှင့်အလွန်ကောင်းမွန်သောကျဆုံးအလှဆင်ခြင်းများပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သငျသညျဖရုံသီးလက်ဆောင်အများကြီးပေးချင်တယ်ဆိုရင်သူတို့ကအစအတော်လေးတီထွင်ကြသည်: သူတို့တစ်ပေါင်နှုန်းမျိုးစေ့ 400 ခန့်ထုတ်လုပ်!
အစိမ်းရောင်အစက်အပြောက်အနည်းငယ်နှင့်အတူနောက်ထပ်သေးငယ်တဲ့အဖြူရောင်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလ squash ။ သင်၏ဟယ်လိုဝင်းရွှေဖရုံသီးမျက်နှာ၌ကတ္တရာများရှိချင်ပါသည်။
Lumina ဖရုံသီးသည်အလွန်လူကြိုက်များသောအရာဖြစ်ပြီး ၁၀ ပေမှ ၁၅ ပေါင်အထိကြီးထွားလာပြီးအဖြူရောင်နီးပါးသင့်ဥယျာဉ်ကိုဆီမီးများမလင်းစေဘဲလိမ္မော်ရောင်အသားဖြင့်ကြွားနိုင်သည်။
သင်၏ဥယျာဉ်ကိုသူငယ်ချင်းများနှင့်ဆွေးနွေးသည့်အခါဤအမျိုးအစားကိုရည်ညွှန်းခြင်းကရယ်စရာကောင်းနိုင်သည်။ ၁၅၅ ရက်ခန့်ထိုနှင်းဖုံးအရေပြားကိုရရှိရန်အချိန်များစွာလိုအပ်သည်
ပုံမှန်ဖရုံသီးဖောင်းပွမှုကြောင့်သင်အကြိုက်ဆုံးဂျက် oLantern မျက်နှာကိုထွင်းရန်ခက်ခဲစေလျှင်၊ မုန့်ဖုတ်သောအခါ Casper သည်အလွန်ချိုသောအရသာရှိကြောင်းသတိရပါ။ ထို့ကြောင့်အခြားမွှေးပါဝင်သောပါဝင်ပစ္စည်းပမာဏကိုလျော်ကြေးပေးရန်ပြောင်းပါ။
ပိုကြီးတဲ့အသားပိုဖရုံသီးလိုချင်လား လပြည့်သည်ပေါင် ၉၀ အထိရနိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ဤကြီးမားသောအမျိုးအစားကိုအဖြူရောင်ထားလိုပါကအရိပ်ထဲတွင်သာထားပါ။
Rupp Seeds ဒီတစ်ခုတီထွင်ထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည်အားကြီးသောပင်စည်နှင့်ရိုးရာပတ် ၀ န်းကျင်ဖရုံပုံရှိသည်။ အဝါရောင်ကိုကာကွယ်ရန်သင်၏ရွှေဖရုံသီးကိုမှောင်မိုက်။ အေးသောနေရာတွင်ထားပါ။
Gee, ဒီအဖြူအလှအပဖို့ 'လ' ကိုးကားအများကြီးရှိပါတယ်။ ကြောင်းအဘယ်ကြောင့်ငါစိတ်ကူးလို့မရပါဘူး။ ဤလကိုအထူးပြုလုပ်ထားသောအရာသည်အမှုန့်များနှင့် zucchini yellow mosaic virus ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ ၎င်း၏အလတ်စားအရွယ်အစားသည်၎င်း၏လေးလံသောဆွေမျိုးများထက်ကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည်။
အနည်းငယ်ပုံသဏ္inာန်ပြားချပ်ချပ်အနည်းငယ်နှင့်အရသာအနည်းငယ်ချိုမြိန်။ ၎င်းသည်အလတ်စားဖရုံသီးဖြစ်ပြီးအလေးချိန် ၈ ပေါင်မှ ၁၀ ပေါင်အထိရှိပြီးရင့်ကျက်ရန်ရက်ပေါင်း ၁၁၀ ကြာသည်။
အဆိုပါ Crystal စတားသည်အခြားမျိုးကွဲအနည်းငယ်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အသက်အရွယ်နှင့်အတူအဝါရောင်မထားဘူး။ အချင်း ၃၅ ပေါင်နှင့်အနံ ၁၂ လက်မခန့်ရှိပြီး၎င်းသည်အညီအမျှခွဲဝေထားသောပျော့ဖတ်နှင့်အတူထွင်းထုခြင်းနှင့်ချက်ပြုတ်ခြင်းအတွက်ကြီးမားသောဖရုံသီးဖြစ်သည်။
၎င်း၏မမှန်ပုံသဏ္,ာန်, အသားထူနှင့်ပုံမှန်မဟုတ်သောအရသာနှင့်အတူမိသားစု၏ oddball ။ သင်အမှန်တကယ်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားခြင်းမရှိပါကထွင်းထုဘို့တကယ့်ကိုအကောင်းရွေး။
ဒါဟာ 65 လောက်ပေါင်အလေးချိန်, အသံကဲ့သို့ကြီးမားသောပါပဲ။ (ဟေးငါကဗျာတစ်ပုဒ်!!) ထိုတောက်ပသောအဖြူရောင်အရောင်ရရန်ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်နေတွင်သိုထားပါ။
Snowballs သည်ထောင်ပေါင်းများစွာသောမျိုးစေ့များကိုအနည်းငယ်၊ ပတ်ပတ်လည် ၂ ပေါင်ရှိသောအထုပ်ထဲတွင်ထုပ်သည်။ သူတို့၏အစိမ်းရင့်မှည့်သည်သူတို့၏အဖြူရောင်အသားအရေနှင့်ကောင်းစွာနှိုင်းယှဉ်သည်။
Antartica ကလွဲပြီးဖရုံသီးတွေကိုနေရာတိုင်းမှာစိုက်ပျိုးနိုင်တယ်။ ဤတွင်သင်သိရန်လိုအပ်သောအရာကိုအပေါ်နိမ့်ပါတယ်။
မိုးများတဲ့နေရာမှာသင်နေသလား။ ရေမ ၀ င်ခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက်အဖြူရောင်ဖရုံသီးအစေ့များကိုမြေတောင်ပို့တစ်ခုတွင်စိုက်ကြည့်ပါ။ မင်းရဲ့တံခါးကိုအမြဲလေတိုက်နေသလား လေပြေကိုပိတ်ဆို့ဖို့မြောင်းထဲမှာစိုက်ပါ။
သင်ပူနွေးသောရာသီဥတုတွင်နေထိုင်ပါကဖရုံသီးကိုအမြဲတမ်းကောင်းစွာမစိုက်ပျိုးသောကြောင့်အပြင်ကိုမျိုးစေ့ချခြင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ အေးတဲ့နေရာတစ်ခုမှာသင်နေထိုင်မယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့အစေ့ကိုအိမ်တွင်းမှာစတင်ပါ။ တစ်နေ့လျှင်အပူချိန် ၇၀ ဒီဂရီနှင့်ညအချိန်တွင် ၅၅ ဒီဂရီထက်မနည်းသည့်အခါအပြင်ဘက်တွင်အပင်များကိုလုံခြုံစွာစိုက်ပျိုးနိုင်သည်။ အပူချိန်အအေးသည်ဤစက်ရုံနှင့်မသင့်တော်ပါ။
သင်ရွေးချယ်သောအစက်အပြောက်၌ရေအနည်းငယ်ကျန်ရှိနေသောကောင်းမွန်သောရေမြေများရှိကြောင်းသေချာပါစေ။ ဖရုံသီးများသည်အလွန်အမင်းခြောက်သွေ့မှုကိုတန်ဖိုးမထားပါ။ အရိပ်ပမာဏသည်သင်ရွေးချယ်သောအမျိုးအစားပေါ်မူတည်သည်။ တချို့ကသူတို့ရဲ့အဖြူရောင်အရောင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အရိပ်လိုအပ်ပါတယ်။ သငျသညျအသီးအပွနှစ်သက်သောပတ်ပတ်လည်ပုံသဏ္haveာန်ချင်တယ်ဆိုရင်, မြေဆီလွှာအဆင့်ကိုချောမွေ့စေ။ မညီမညာဖြစ်နေသောမြေဆီလွှာသည်ဖရုံသီးကိုဖြစ်စေသည်။
ရွှေဖရုံသီးသည်အနီရောင်၊ လိမ္မော်ရောင်၊ အဖြူရောင်သို့မဟုတ်အပြာနင့်နေပါစေသူတို့၏စောင်များကိုသာရှိသည်။ သင်သည်မည်သည့်စက်ရုံနှင့်အတူလိုသည်အတိုင်း, ဒီဆောင်းတွင်း squash ရဲ့အထူးလိုအပ်ချက်များကိုအထူးမှတ်စုယူပါ။
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းမတူကွဲပြားသောအမျိုးအစားများသည်လ၏အလင်းရောင်သံကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန်နှင့်ထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဥပမာ - Polar Bear သည်ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်နေရောင်အနည်းငယ်သာရှိပြီး Full Moon သည်အဖြူရောင်နေရန်အရိပ်လိုအပ်သည်။ သင်၏အမျိုးအစားရွေးချယ်မှုသည်သင်၏ရွှေဖရုံသီး၌သင်ရရှိနိုင်သောနေနှင့်အရိပ်areasရိယာများပေါ်တွင်မူတည်သည်။ များစွာသောဖရုံသီးများသည်တစ်နေ့လျှင်ရှစ်နာရီခန့်ကြာသည်။
အပင်များသည်ရေမရှိသောကြောင့်ရေထဲ၌ရေကူးခြင်းကိုမကြိုက်ကြပါ။ ရေနုတ်မြောင်းသည်အလွန်ကောင်းကြောင်းသေချာစေပါစေ၊ Mulch သည်ဤချိန်ခွင်လျှာကိုထိန်းသိမ်းရာတွင်အထောက်အကူပြုနိုင်သည်။
ငါသိသာသောအကြံပြုချက်များနှင့်အတူသင်တို့ကို ဦး ခေါင်းကျော်ရိုက်နှက်သူတစ် ဦး ညှိုးနွမ်းနေသောမိခင်ကဲ့သို့မြည်ချင်ကြဘူး, ဒါပေမယ့်ငါကဒီမှာငါသွား - ဖရုံသီးပိုကြီး, ကလိုအပ်လိမ့်မည်နေရာ။ ရထိုက်သော“ Duh!” ဖြင့်တုံ့ပြန်ရန်တွန့်ဆုတ်ပါ။ ဖရုံသီးကိုယ်တိုင်ကကြီးမားလွန်းမည်မဟုတ်သော်လည်းစပျစ်ပင်များသည်ကျယ်ပြန့်စွာပျံ့နှံ့နိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သူတို့အားအစိမ်းရောင်ကောက်ကောက်နေရာအတွက်နေရာများစွာခွင့်ပြုပါ။
ပျားများသည် ၀ တ်မှုန်ကူးရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ထို့ကြောင့်သင်၏ပခုံးပေါ်သို့ပျားများဆွဲဆောင်နိုင်မည့်အပင်များကိုရွေးချယ်ပါ။ နေကြာပွင့်များသည်သင်၏စပျစ်နွယ်ပင်များကိုမြုပ်ချင်သောပိုးမွှားများကိုတားဆီးနိုင်သည်။
ရွှေဖရုံသီးကိုလက်ချောင်းဖြင့်တစ်ချက်နှိပ်ပြီးဆွန်းမြည်သံကိုနားထောင်ပါ။ အရေပြားထဲသို့လက်ချောင်းတစ်ချောင်းနှိပ်ခြင်းဖြင့်ခံနိုင်ရည်ရှိမရှိစစ်ဆေးပါ။ အရေပြားနဂိုအတိုင်းရှိနေပါကမှည့်သည်။
အသီးအများစုကိုခြောက်သွေ့အေးမြသောအရိပ်နေရာများတွင်သိုလှောင်ထားရန်လိုအပ်သည်။ Polar Bear ကဲ့သို့အချို့သောအမျိုးအစားများသည်ရိတ်သိမ်းပြီးနောက်နေရောင်အနည်းငယ်သာကျသည်။
ဖရုံသီးများသည်အကြမ်းခံသော်လည်းရန်သူအနည်းငယ်ရှိသည်။ အောက်ဖော်ပြပါအချက်အလက်များသည်သင့်အားကျူးကျော်သူများအကြောင်းနှင့်၎င်းတို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဘာလုပ်ရမည်ကိုပြောပြလိမ့်မည်။
Aphids မကြာခဏပိုးမွှားများစာရင်းတွင်ပထမ ဦး ဆုံးဖြစ်ကြသည်။ ဤရွေ့ကား အလွန်သေးငယ်သောအစိမ်းသို့မဟုတ်အဖြူ bug တွေ လျင်မြန်စွာပွားများခြင်းနှင့်အရွက်များနှင့်အပွင့်အပေါ် nibble မှချစ်ကြတယ်။ သူတို့ပါတီကိုစောစောစီးစီးရေကောင်းတစ်ခွက်နဲ့တိုက်မိတာအကောင်းဆုံး။ Ladybugs များကိုမိတ်ဆက်ပေးခြင်းသည်လူများကိုလည်းထိန်းချုပ်နိုင်သည်။
သူတို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပိုးတောင်မာ သခွားသီးပိုးတောင်မာများ ဒါမှမဟုတ် squash bug တွေ , များသောအားဖြင့်အကောင်းဆုံးသူတို့ကိုချွတ်ကောက်ခြင်းနှင့်ဆပ်ပြာရေနှင့်ရောနှောအမိုးနီးယားစည်ပိုင်းထဲမှာသူတို့ကိုရေနစ်သေဆုံးခြင်းဖြင့်ကိုင်တွယ်ကြသည်။ အနီးရှိစိုက်နေခဲ့သည့်နေကြာများကလည်းဖရုံသီးများကပိုးမွှားများကိုစားသုံးခြင်းမှအာရုံမ ၀ င်မီပန်းပွင့်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။
သင်သည်အစာစားချင်တော့မည့်နောက်အမှုန်တစ်မျိုးကိုသင်ပြန်လည်စဉ်းစားမိနိုင်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏အမည်နှင့်တူပြီးမြေကြီးပေါ်တွင်နေထိုင်ပြီးလေနှင့်အတူရွေ့လျားနိုင်သည်။ မှိုသတ်ဆေးတစ်မျိုးသည်၎င်းကိုထိန်းချုပ်နိုင်သည်။ ကောက်ပဲသီးနှံများလည်ပတ်ခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအပင်များကိုကူးစက်ခြင်းမှရှောင်ရှားနိုင်သည်။
ပိုမိုသိရှိရန် : အမှုန့်များအနာကိုမည်သို့ကာကွယ်တားဆီးရမည်နည်း
Zucchini အဝါရောင် Mosaic ဗိုင်းရပ်စ်
Zucchini Yellow Mosaic ဗိုင်းရပ်စ်နှင့်အခြားသောအလားတူဗိုင်းရပ်စ်အချို့ကိုအထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သော aphids ကဲ့သို့သောလည်ချောင်းနာသောသေးငယ်သော critters များမှတဆင့်ဖရုံသီးပင်များသို့မကြာခဏလွှဲပြောင်းပေးသည်။ စောစောစီးစီးကူးစက်လျှင်အသီးကိုပြင်းထန်စွာလျှော့ချနိုင်သည်။ ပေါင်းပင်များသည်ရောဂါကူးစက်မှုကိုပျံ့နှံ့စေသည့်အတွက်ပိုးမွှားများကိုပေါင်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းကိုသတိထားပါ။ ဗိုင်းရပ်စ်များကိုခံနိုင်ရည်ရှိပြီးနောက်မှမဟုတ်ဘဲရင့်ကျက်သောမျိုးများကိုစိုက်ပျိုးရန်စဉ်းစားပါ။
ဖြေ။ ။ ဖရုံသီးကြီးထွားမှုအဆင့်များသည်မတူကွဲပြားသောအမျိုးအစားများနှင့်ကွဲပြားလိမ့်မည်။ အချို့သည်ရက်ပေါင်း ၉၀ အထိရင့်မှည့်လာပြီးအချို့သည် ၁၅၅ ရက်အထိနောက်ကျသွားသည်။
အကူအညီ။ ကျွန်တော့်ဖရုံသီးအဝါရောင်ပြောင်းလာတယ်။ ငါဘာအမှားလုပ်နေတာလဲ
A: သင်ကြီးထွားလာတဲ့ဖရုံသီးအမျိုးအစားကိုစစ်ဆေးပါ။ အချို့သောဖရုံသီးများသည်အရိပ်အနည်းငယ်လိုအပ်သည်။ Polar Bear ကဲ့သို့သောအခြားသူများသည်သူတို့၏မျက်မမြင်အဖြူရောင်အရောင်ကိုရရှိရန်အတွက် sunning အချို့လိုအပ်သည်။ စပျစ်ပင်သည်အသီးမှည့်သည်ကို၎င်း၊ သူတို့အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှအဝါရောင်ပြောင်းလာကြတယ်။
သင်၏ဥယျာဉ်အဖွဲ့၏နောက်လာမည့်ဟယ်လိုဝိန်းပွဲ၌လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သလားသို့မဟုတ်သရဲခြောက်နေသလား။ သင်၏ Caspers၊ သင်၏ Full Moon, Silver Moon နှင့်သင်၏ချစ်စရာကောင်းသောကလေး Boos အကြောင်းသူတို့ကိုပြောပြပါ။
ထို့နောက် Polar Bears နှင့် Snowballs အကြောင်းမှတ်ချက်အနည်းငယ် ပေး၍ သူတို့ကိုအမှန်တကယ်ရှုပ်ထွေးစေရန်ခရစ်စမတ်သို့အလျင်အမြန်ပြောင်းလဲလိုက်သည်။ စတိုးဆိုင်များရှိဟယ်လိုဝိန်းပွဲနှင့်တစ်ချိန်တည်းတွင်ခရစ်စမတ်ကုန်ပစ္စည်းများကိုမမြင်တွေ့လိုသူများကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မည်။ သို့သော်၎င်းသည်လည်းပျော်စရာကောင်းနိုင်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါထင်မြင်ချက်များတွင်ဤလှပသောအဖြူရောင်ဆောင်းတွင်း squash နှင့်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
multi-level ကို PVC ဟင်းသီးဟင်းရွက်ကွန်တိန်နာဥယျာဉ်